Greater Miami Musangano & Vashanyi Bureau Inosheedzera Nyowani Mutungamiri uye CEO
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Greater Miami Musangano & Vashanyi Bureau Inosheedzera Nyowani Mutungamiri uye CEO
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hospitality Industry • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
David Whitaker akagadzwa anotevera Mutungamiri & CEO wesangano rekushambadzira kwekuenda kuGreater Miami neMiami Beach.
Kusarudzwa uku ndiko kugadziriswa kwaWhitaker uyo akashanda senhengo yeboka reGMCVB kwemakore gumi nemanomwe.
Whitaker akasiya Miami pakutanga muna 2007 nekuda kwekugadzwa kune chinzvimbo cheMutungamiri & CEO weTourism Toronto.
Kwemakore mashanu apfuura, Whitaker akashanda seMutungamiriri & CEO we Sarudza Chicago, iyo DMO yeChicago.
The Greater Miami Musangano & Vashanyi Bureau (GMCVB) yazivisa nhasi kuti David Whitaker akagadzwa anotevera Mutungamiriri & CEO wesangano rekushambadzira kwekuenda (DMO) yeGreater Miami neMiami Beach. Kusarudzwa uku ndiko kudzora kwaWhitaker akashanda senhengo yeGMCVB timu kwemakore gumi nemanomwe (17 - 1990), nguva pfupi yadarika seMutevedzeri Wemutungamiriri weNyika uye Chief Marketing Officer. Makore mashanu izvi zvisati zvaitika, akashanda pane vatungamiriri veUnited Way yeMiami-Dade.
Whitaker akabva Miami kutanga muna 2007 nekuda kwekugadzwa kune chinzvimbo cheMutungamiri & CEO weToronto Toronto (yava kunzi Destination Toronto), iyo DMO yeToronto, kwaakatungamira sangano kwemakore masere. Munguva yehutongi hwake muToronto, sangano rakavhoterwa musangano wekumusoro weNorth America nevashanyi Bureau nenzvimbo yekokorodzano musarudzo yevanopfuura 650 vanoronga misangano. Whitaker akatungamira mabudiriro akabudirira kutora NBA All-Star Game uye Pan American / Parapan American Game.
Pakupera kwekugara kwake muToronto uye mumakore mashanu apfuura, Whitaker akashanda semutungamiri & CEO weSarudza Chicago, iyo DMO yeChicago. Munguva yehutongi hwake muChicago, aive nebasa rekusimudzira nekutengesa nzvimbo hombe yegungano muUnited States, McCormick Place. Pasi pehutungamiriri hwake, DMO yakabudirira kukwikwidza uye kuitisa NBA All-Star Game, MLS All-Star Game, North America yekutanga Laver Cup mutambo wetenisi wepasi rose, NCAA Frozen Four, uye dzakawanda dzakawanda nhabvu nhabvu zviitiko. Chicago, senzvimbo yekuenda, yakavhoterwa musarudzo ine mukurumbira yevadzidzi ve savvy veCondéNast Traveler Readers' Sarudzo Mipiro se "Rakanyanya Guta Guru" kushanyira kune zvisati zvamboitika makore mana akateedzana (2017 - 2020), zvese izvi zvakaitika pasi pehutungamiriri hwaWhitaker.
"David anodzosa kwatiri kushamwaridzana kusingawanzo uye kune simba - hupfumi hwakakura hwechiitiko neruzivo munharaunda medu, zvakabatanidzwa nenyika yakakosha yezviitiko zvakawanikwa kubva mukusimudzira maviri emhando dzakasiyana uye dzepasi rose dzeNorth America muChicago neToronto," akadaro GMCVB Sachigaro Bruce Orosz. “Mubatanidzwa uyu, kunyanya nemaguta ese aakatungamira zvakanyanya senzvimbo huru dzemagungano uye zviitiko, zvichabatsira indasitiri yedu yekugamuchira vaeni nevatinoshanda navo kutora Greater Miami neMiami Beach padanho rinotevera. "David akavewo nekubudirira kukuru mukusimudzira nharaunda dzakasiyana uye anoratidza kuda kwakasimba kusimudzira kusiyanisa, kuenzana nekubatanidzwa".
Whitaker akasarudzwa pakupera kwemwedzi mitanhatu yepamusoro-soro yenyika kutsvagisa kwakaitwa nekomisheni yakasarudzika-gumi nenhatu yekutsvaga komiti inoumbwa nevatungamiriri vemuno nevemunharaunda vanoratidzira marudzi eMiami-Dade County, madzinza, murume nemukadzi zvakasiyana, pamwe sekusiyana kwemamwe masangano uye maindasitiri muMiami-Dade County, kunyanya indasitiri yekugamuchira vaeni. Dare rekutsvaga rakapihwa zano naMike Gamble, Chief Executive Officer weSearchWide Global, kambani yepamusoro yekutsvaga yekutsvaga inongovhara nzvimbo yeDMO uye Jaret Davis, Co-Managing shareholder weGreenberg Traurig, kwenguva yakareba kunze kwezano kuGMCVB. Dare rekutsvaga rakaraira kutsvaga kwakazara kwevose vanokwanisa kukwikwidza, munharaunda nemunyika, vachifunga hunhu hwaMiami senzvimbo yekuenda. Dare rekutsvaga rakaraira zvakare kuti slate iratidze kusiyana kwakapfuma kweMiami-Dade County, zvichizoguma kwaita seti yemubvunzurudzo yekutanga, 14% yacho yaive yakasiyana nehunhu, madzinza uye maonero eLGBTQ uye 75% yadzo yaive neAfrican-American. mumiririri. Kubvunzurudzwa kwechipiri kwaisanganisira makumi mashanu muzana evasarudzo vakasiyana kubva pachikadzi, madzinza uye LGBTQ maonero, 25% ayo aive nemumiriri weAfrica American. Pakazara, iro boka, rakabatsirwa neWatchWide Global, rakabvunza kana kuwedzeredza kune vangangoita zana nemakumi maviri nevaviri vaigona kukwikwidza kubva munharaunda yemunharaunda, kutenderera nyika nekune dzimwe nyika, uye vakaita misangano vakatarisana nevasere musarudzo yekutanga uye vana vakakwikwidza denderedzwa repiri.